GandaWIN | Elegence & Beauty Unleashed by Empowering women in Myanamar | Page 3
GandaWinElegance and beauty unleashed
13 Surprising Things That Ruin Your Skin Part – 2
GandaWinAdmin - May 15, 2016 0
1 - Squinting Your Eyes Wearing outdated contacts and glasses will cause you to squint more, and in turn, lead to fine lines and wrinkles...
6 Best Home Remedies for Puffy Eyes
Eye puffiness can bealittle tricky to get rid of. However, there areafew easy and cheap ways to treat puffy eyes...
13 Surprising Things That Ruin Your Skin Part – 1
1 - Sleeping With Your Makeup On Falling asleep with your makeup on can lead to bacterial infections and clogged pores, causing acne. And the residue that...
Homemade Remedies for Oily Skin
GandaWinAdmin - Jun 13, 2014 0
Follow these natural beauty tip recommendations about how to get rid of oily skin. Clean thoroughly your oily skin at least twiceaday with...
7 Make-up Issues Every Women Has
GandaWinAdmin - May 25, 2014 0
Whether or not you’re an expert at applying your cosmetics, there are make-up issues every woman has. It'sahard work to look so...
Advice to my Daughter- Things to Remember When Life Gets Rough
Dear daughter, life is amazing. But sometimes, it is hard to acknowledge, especially when we go through terrible situations and hard times. But we...
Friendship Advice to my Daughter
Daughter, in today’s busy world, as you might already know, supporting and feedingahealthy friendship is not always as easy as it sounds....
6 Things You Can do While Waiting for the Love of Your Life
Just like you will consider the best course for your career choice, you will have given thought to the kind of man you want...
9 Reasons Why Long Distance Relationships Fail to Work
Long distance relationships are often risky. Sometimes, couples in long distance relationships fall apart when they start living in different cities for various reasons....
Although many people associate love witharomantic feeling, there areafew types of love you might experience in your life. You may...
AllFables & StoriesKnowledge BankWomen
When I wasayoung man, I wanted to change the world. I found it was difficult to change the world, so I tried to change my...
Friendships woes don’t end in high schools. We all mess up sometimes and end up hurtingafriend's feelings. But now that we are...
A little girl went intoadrug store, reached forasoda carton and pulled it over to the telephone. She climbed onto the...
Who or What do we love more?
A man was polishing his new car; his4yr old daughter picked upastone and scratched on the side of the car....
10 Things You Should Give Up To Be Happy
Happiness isachoice. It is totally up to us. But there are certain things we hold on to that actually hinder our joy....
AllHealth & FitnessHealthy MindJokes
In our current culture, it can seem as though common etiquette habits have faded away. There isasense of respect for others that...
Some people say that they do not care if people like them or not, but for most it is not the case. Most of...
Changing your lifestyle could beabig step toward diabetes prevention — and it is never too late to start. Consider these tips. When it...
GandaWinAdmin - Jul 1, 2014 0
A comment from someone can ruin your day if you allow to be so. The comment may be made thoughtlessly or maliciously. Either way,...
GandaWinAdmin - Jun 26, 2014 0
Motivation is the key to success. If you are able to constantly motivate yourself, you are going to achieve great results in everything you...
Mont Lone Ye Baw
GandaWinAdmin - Apr 12, 2014 0
Mont Lone Ye Baw is one of the eateries that symbolize the Water Festival, Thingyan, in Myanmar. People usually make Mont Lone Ye Baw...
10 Super Food For Flawless Skin And Beautiful Hair
GandaWinAdmin - Feb 19, 2014 0
There’s no big secret when it comes to having beautiful hair and flawless skin, and you won’t find it at the bottom of your makeup bag. You...
AllArts & Crafts
Mother Daughter Duo Create Incredible Dresses Using Papers
GandaWinAdmin - Apr 3, 2014 0
Look out, fashionistas! It's Project Runway for the Preschool Set! Last May, 4-year-old "Mayhem" (as she is dubbed by her mom) and Mom Angie...
Do-It-Yourself Tips for Rose Potpourri
GandaWinAdmin - Mar 8, 2014 0
The first notes you inhale on enteringahome saysalot about its inhabitants. The French, however, have made an art out of making...
Unleashing The Creativity of Your Child
GandaWinAdmin - Feb 15, 2014 0
As we the saying goes, "We were born creative, but the challenge is to remain creative as we grow up". By the time we...
“သာယာတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖန်တီးဖို့ ဘာကြောင့် အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်တာလဲ။”
GandaWinAdmin - Jan 30, 2021
စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ။
“မသာယာတဲ့ Relationship ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။”
ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းတဲ့ သူ့လိုယောက်ျားမျိုးနဲ့ လမ်းခွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ကျေးဇူးတင်မိတယ်။
GandaWinAdmin - Jan 2, 2021
ဒီခေတ်အချစ်ရေးအများစုက ဘာကြောင့် လမ်းခွဲလွယ်လာကြတာလဲ။
GandaWinAdmin - Jan 19, 2021
Eco Pad ခေါ်ပြန်လျှော်သုံး အမျိုးသမီး လစဉ်သုံး ပစ္စည်းတွေဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ တကယ်ကိုက်ညီရဲ့လား။
ကျန်းမာသန့်ရှင်း အနံ့ဆိုးကင်းတဲ့ မိန်းမကိုယ်ဖြစ်စေဖို့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်များ
GandaWinAdmin - Dec 5, 2020 0
အမျိုးသမီးတွေအတွက် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးက သိပ်ကိုအရေးပါပါတယ်။ လူမြင်တဲ့နေရာတွေမှာလည်း သန့်ရှင်းနေဖို့လိုသလို လူမမြင်သူမမြင် အစိတ်အပိုင်းတွေမှာလည်း သန့်ရှင်းပြီး ကျန်းမာနေဖို့လိုပါတယ်။ မိန်းမကိုယ်မှာ သန့်ရှင်းမှုမရှိရင် မှိုရောဂါတွေဖြစ်ပွားပြီး အနံ့ဆိုးတွေဖြစ်တတ်တာကြောင့် ပုံမှန်သန့်ရှင်းပေးသင့်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို...
သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်မကျအောင် ဂရုစိုက်ဖို့ ဘာကြောင့်လိုတာလဲ။
GandaWinAdmin - Dec 2, 2020 0
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ မျက်လုံး၊ နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်ကနေ တဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်မတို့အားလုံး သိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ရောက်တာနဲ့ အဆုတ်ထဲကို သွားပြီး အဆုတ်သွေးကြောတွေကို ရောင်ရမ်းစေပါတယ်။...
သူတစ်ပါးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအပေါ် မနာလိုမရှုစိမ့်ခြင်းက ကိုယ့်စိတ်ကျန်းမာရေးကိုသာ ထိခိုက်စေပါတယ်။
GandaWinAdmin - Nov 30, 2020 0
စာချစ်သူတို့ရေ... လေ့လာတွေ့ရှိမှုအရ တခြားသူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကို မုန်းတီးခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကို သာ ထိခိုက်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ အဆိုးမြင်ခြင်းက ဘယ်သူ့အတွက်မှ အကူအညီကောင်းတစ်ခု မဖြစ်စေပါဘူး။ ပျော်ရွှင်မှုအပေါ် မုန်းတီးတဲ့လူတွေဟာ အဆိုးဆုံးလူစားမျိုးတွေလို့ ဆိုရမှာပါ။ လူတိုင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း...
နေရောင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
နေရောင်ခြည်ဟာ… ၁။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို တိုးတက်စေတယ်။ ၂။ ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို လျှော့ချပေးတယ်။ ၃။ စိတ်တက်ကြွစေတယ်။ ၄။ အိပ်စက်ခြင်းပြဿနာတွေကိုလည်း လျှော့ချပေးတယ်။ ဤဆောင်းပါးကို ဂန္ထဝင်မဂ္ဂဇင်းမှ ရေးသားတင်ဆက်သည်။ ၅။ အရိုးတွေကိုလည်း ကြံ့ခိုင်စေတယ်။ ၆။ အရေပြားပြဿနာတွေကိုလည်း ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်။ ၇။...
GandaWinAdmin - Nov 15, 2020 0
Mask မတပ်ဘဲ လမ်းမှာလျှောက်သွားနေတာကို မြင်တဲ့အခါ အိမ်နဲ့ဝေးပြီး အကူအညီပေးနေတဲ့ Volunteer လေးတွေကို အားနာမိတယ်။ အုပ်စုလိုက်လမ်းပေါ်မှာ အုံဖွဲ့နေတာကိုမြင်တဲ့အခါ ဆေးရုံမှာ သေမင်းနဲ့စစ်ခင်းပြီး လူနာရဲ့အသက်ကို လုပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးကို...
လမ်းမထွက်ပါနဲ့။ ကိုဗစ်ကြီးက သင့်ကို စောင့်နေတယ်။
GandaWinAdmin - Nov 11, 2020 0
- သင်သွားရှာတဲ့သူနဲ့တွေ့ချင်မှတွေ့လိမ့်မယ်။ ကိုဗစ်ကြီးနဲ့တွေ့ဖို့က ရာခိုင်နှုန်းပိုများပါတယ်။ - သင်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်း ဈေးဆိုင်မှာ ရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်။ လူစည်ကားတဲ့နေရာတွေလိုက်ရှာနေတဲ့ ကိုဗစ် ကြီးကတော့ သင်မသိနိုင်တဲ့နေရာမှာ ရှိနေနိုင်တယ်။ - သင်ကတော့ အိမ်ထဲနေရတာငြီးငွေ့လာလို့ ခဏအပျင်းပြေလမ်းလျှောက်ထွက်တာ...
GandaWinAdmin - Oct 16, 2020 0
ဒီထက်ပိုပြီး ခက်ခဲတဲ့ ဘဝပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တာကို သတိရပါ။ ပူပန်မှုတွေဟာ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သတိရပါ။ ဘဝကိုတစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲပစ်မယ့် အချိုးအကွေ့တိုင်းဟာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ ဒီကာလကို အတူတူကျော်လွှားပြီးရင် ပိုကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုဆီကို အတူတူတက်လှမ်းကြမယ်။ ဤဆောင်းပါးကိုဂန္ထဝင်မဂ္ဂဇင်းမှရေးသားတင်ဆက်သည်။ ဒီကာလကို ချစ်ခင်ကြင်နာမှုတွေအပြည့်နဲ့ကျော်လွှားကြမယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်...
စကင်းကဲပြီးရင် ပိုပြီး ထိရောက်စေဖို့ အိပ်ရေးဝဝအိပ်ကြပါစို့။
GandaWinAdmin - Oct 2, 2020 0
အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ စိတ်ဖိစီးမှုများလာတာ၊ ညစ်ညမ်းမှုတွေနဲ့ ထိတွေ့လာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပြောင်းအလဲတွေကြောင့် အသားအရေက ငယ်ငယ်တုန်းကလို မလှတော့တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ အဲ့ဒါကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် အိပ်ရေးဝဝအိပ်စက်သင့်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့...
GandaWinAdmin - Sep 28, 2020 0
အဆိုးမြင်စိတ်တွေ ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ… ၁။ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အက်ဆစ်တွေ ထွက်လာတယ်။ ၂။ စိတ်အကြည်ဓာတ်တွေ လျော့ကျလာတယ်။ ၃။ ခံနိုင်ရည်တွေ လျော့ကျလာတယ်။ ၄။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ထိခိုက်လာတယ်။ ဤဆောင်းပါးကို ဂန္ထဝင်မဂ္ဂဇင်းမှ ရေးသားတင်ဆက်သည်။ ၅။ နှလုံးခုန်နှုန်း...
GandaWinAdmin - Sep 24, 2020 0
ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ… အရာရာကို အကောင်းမြင်စိတ်ရှိမယ်။ အသက်ရှည်ရှည်နေရမယ်။ အစာခြေဖျက်နိုင်စွမ်း ကောင်းမွန်မယ်။ အားအင်သန်စွမ်းလာမယ်။ ကျစ်လစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်မယ်။ ကျန်းမာရေး မကောင်းမွန်တဲ့အခါမှာတော့… စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းလာမယ်။ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေများပြားလာမယ်။ ...
ဘဝရေးရာ အဖြာဖြာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မဖြစ်မနေဖတ်သင့်တဲ့ တစ်ပတ်တာဗေဒင်”
GandaWinAdmin - Jan 25, 2021
လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မဖြစ်မနေ ဖတ်သင့်တဲ့ တစ်ပတ်တာဗေဒင်
GandaWinAdmin - Jan 18, 2021
ရာသီဖွားတိုင်းအတွက် မဖြစ်မနေဖတ်သင့်တဲ့ တစ်ပတ်တာ အချစ်ရေး ဗေဒင်
GandaWinAdmin - Jan 11, 2021
GandaWin isawomen empowerment and lifestyle blog that offers relevant and useful information to enableaquality life for the Women of Myanmar.
© Copyright 2021 - GandaWin.net